Inona Ilay hoe “Tenin’Andriamanitra” ao Amin’ny Hebreo 4:12?
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bassa (Cameroun) Bengali Bicol Boligara Boulou Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Cinghalais Cinyanja Dangme Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fon Frantsay Ga Galoà Goujrati Goun Grika Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Kabiyè Kannada Kikamba Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Koreanina Kroaty Kurde Kurmanji (Caucase) Kurde Kurmanji (Sirilika) Kwangali Kwanyama Letonianina Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Malagasy Malayalam Malezianina Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Mingrelian Mixe Mongol Myama Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Norvezianina Nzema Népali Okpé Oromo Ossète Ourdou Ouzbek Pangasinan Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Pidgin Nizerianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Portogey Quechua (Bolivia) Romanianina Rosianina Samoanina Sango Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swati Tagalog Tailandey Tajiki Tamoul Tatar Tchouvache Tenin’ny Tanana Aostralianina Tenin’ny Tanana Indianina Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tok Pisin Tseky Tsonga Turkmène Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Venda Vietnamianina Waray-Waray Wolaita Xhosa Yorobà Zandé Zapoteky (Andilan-tany) Zoloa Éwé
“Velona sy mahery ny tenin’Andriamanitra”
Inona ilay “tenin’Andriamanitra” resahin’ny Hebreo 4:12 hoe “velona sy mahery”?
Hita amin’ny teny manodidina fa ny tian’ny apostoly Paoly holazaina dia ny hafatr’Andriamanitra na izay nolazainy fa hataony. Voasoratra ao amin’ny Baiboly ny sasany amin’izany.
Matetika ny Hebreo 4:12 no anaporofoan’ny bokintsika hoe afaka manova olona ny Baiboly, ary mety tsara izany. Ilaina anefa ny mijery ny teny manodidina. Nampirisika ny Kristianina hebreo i Paoly tamin’izay mba hanao zavatra mifanaraka amin’izay tian’Andriamanitra hatao. Hita ao amin’ny Soratra Masina ny maro amin’izany. Nilaza, ohatra, i Paoly fa afaka nanantena hiditra tao amin’ny tany “tondra-dronono sy tantely” ny Israelita nafahana avy tany Ejipta. Hiditra amin’ny fitsaharan’Andriamanitra izy ireo amin’izay, ka tena hiadana.—Eks. 3:8; Deot. 12:9, 10.
Izany no nolazain’Andriamanitra fa hataony. Tsy tafiditra tamin’ny fitsaharany anefa ny ankamaroan’ny Israelita, satria nanamafy ny fony sy tsy naneho finoana. (Nom. 14:30; Jos. 14:6-10) Na izany aza, dia nilaza i Paoly fa nampanantena Andriamanitra hoe mbola azo atao ny miditra amin’ny fitsaharany. (Heb. 3:16-19; 4:1) Anisan’ny zavatra nolazainy fa hataony izany. Afaka mahafantatra an’izay tian’Andriamanitra hatao sy manao zavatra mifanaraka amin’izany isika, toa an’ireo Kristianina hebreo. Niresaka an’izay voalazan’ny Genesisy 2:2 sy ny Salamo 95:11 i Paoly, mba hanamafisana fa avy ao amin’ny Soratra Masina io fampanantenana io.
Tena tokony ho faly isika satria mbola afaka miditra amin’ny fitsaharan’Andriamanitra. Matoky an’izany isika, ka efa manao zavatra mba hidirana amin’izy io. Tsy hoe mitandrina ny Lalàn’i Mosesy isika na manao zavatra tsara hafa, dia tafiditra amin’izy io. Maneho finoana kosa isika, ka manao zavatra mifanaraka amin’izay tian’Andriamanitra hatao foana. Maro koa eran-tany no mianatra Baiboly sy miezaka hahalala ny sitrapon’Andriamanitra. Maro amin’izy ireny no miova sy lasa maneho finoana ary atao batisa. Hita eo amin’ny fiainany fa “velona sy mahery ny tenin’Andriamanitra.” Hitantsika tao amin’ny Baiboly hoe inona no tian’Andriamanitra hatao. Nisy vokany be tamintsika izany ary mbola hisy heriny amintsika foana.
Fanontanian’ny Mpamaky—Septambra 2016
Fanontanian’ny Mpamaky​—Martsa 2018
Fanontanian’ny Mpamaky—Desambra 2017